होटेलमा काम गर्ने बलिउडका चर्चित कमेडियन सञ्जयको सम्पत्ति सुन्दा नै चकित पर्नुहुनेछ ! – Annapurna Daily
होटेलमा काम गर्ने बलिउडका चर्चित कमेडियन सञ्जयको सम्पत्ति सुन्दा नै चकित पर्नुहुनेछ !
बलिउडमा स्टारडमलाई खुब महत्व दिइन्छ । कुनै स्टारले अनुहार देखाएकै भरमा नाफा दिलाउँछ भनेर निर्माताले दिल खोलेर लगानी गर्छन् । तर, बलिउडमै केही यस्ता कलाकार छन्, जसले आफ्नो अभिनयको बलमा स्टार हिरो–हिरोइनलाई समेत छायामा पारिदिन्छन् । यस्तै एउटा नाम हो, सञ्जय मिश्रा ।
सञ्जय बलिउडका चर्चित कमेडियन हुन् । तर, सञ्जयका लागि एक समय यस्तो थियो, उनी अभिनय क्षेत्र छाडेर ऋषिकेश गए र त्यहाँ एउटा होटेलमा काम गर्न थाले । यो समय उनको बाबुको मृत्यु भएको समय थियो । पिताको मृत्युपछि उनले अभिनय क्षेत्र नै छाडिदिए । अलि पछि घर नै छाडिदिए र ऋषिकेश गए । त्यतिवेलासम्म सञ्जयले सयभन्दा ज्यादा फिल्ममा अभिनय गरिसकेका थिए । तर, उनलाई सफलता मिलेको थिएन । यही कारण उनलाई रोटी–तरकारी बनाइने होटेलमा कसैले चिनेनन् । यदि निर्देशक रोहित सेट्टी थिएनन् भने सञ्जयको त्यसपछिका दिन पनि होटेलमै बित्ने थिए ।
रोहित र सञ्जयले फिल्म ‘गोलमाल’मा काम गरिसकेका थिए । रोहित ‘अल द बेस्ट’मा काम गरिरहेका थिए । त्यही कामको समयमा उनले सञ्जयलाई सम्झिए । सञ्जय भने फिल्ममा कमब्याक गर्न तयार थिएनन् । तर, रोहितले फिल्म खेल्नका लागि उनलाई राजी गराइछाडे ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ । यसपछि भने सञ्जयले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । उनले लगातार हिट फिल्ममा काम गरिरहेका छन् । अहिले सञ्जयको सम्पत्ति नै २० करोडभन्दा ज्यादा रहेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।